ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Moto G7 ၂၄၉ ယူရိုနဲ့တန်သင့်သလား။ | Androidsis
Francisco Ruiz | | Motorola က, reviews
ယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ရောက်လာသည် သံသယသူဖြစ်သည် Motorola တံဆိပ်၏အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်သည် အရာယခုနှစ်အနည်းငယ်များအတွက် Lenovo ကုမ္ပဏီအုပ်စုတစ်စု၏အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ Motorola ရဲ့ Moto G အကွာအဝေးအကြောင်းပြောနေတာသေချာတာပေါ့၊ Motorola က Moto G7.
Motorola Moto G အကွာအဝေးသည်အစပိုင်းတွင်အလယ်အလတ်တန်းစား Android ဖုန်းအစိတ်အပိုင်းကိုတတ်နိုင်သည့် terminal နှင့်၎င်း၏နောက်ကွယ်တွင်ကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ပြောင်းလဲနေသောတကယ့်လေပြင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ Android ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားမှာစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရပ်စဲသွားခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့သူတို့ဟာသူတို့လမ်းကြောင်းကနေလမ်းလွဲသွားခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ Motorola မှကုမ္ပဏီမှထိုအချိန်ကထိုအချိန်ကအမေရိကန်မှဆင်းသက်လာသောကုမ္ပဏီကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ မေးခွန်းမှာ - Motorola သည်လူသိများသော Android Mid-range တွင်ဤ Moto G7 အသစ်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်လား။.
1 Motorola Moto G7 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
2 Moto G7 ကပေးတဲ့အရာအားလုံး
3 အဆိုးဆုံး Moto G7
4 Moto G7 ကင်မရာစမ်းသပ်မှု
Motorola Moto G7 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ပုံစံ Moto G7
operating system Pure Android 9.0 ကို ၁၈ လကြာဗားရှင်းအသစ်သို့အဆင့်မြှင့်နိုင်ပြီး Android လုံခြုံရေး patch များကိုနှစ်နှစ်ကြာသည်
ဖန်သားပြင် ၆.၂ လက်မ IPS LCD သည် FHD + resolution 6.2 x 2270 Pixels 1080 dpi နှင့်တတိယမျိုးဆက် Corning Gorilla Glass ကာကွယ်မှုကိုဖန်သားပြင်နှင့် terminal ၏နောက်ကျောတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Processor ကို Qualcomm Snapdragon 632 Octa Core 1.8 Ghz
GPU ကို Adreno 506
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 64 Gb ကို MicroSd မှတဆင့်တိုးချဲ့နိုင်ပြီး 128 Gb အထိသိုလှောင်နိုင်မှုပမာဏအနေဖြင့် SIM ကိုစွန့်လွှတ်စရာမလိုပါ
နောက်ကင်မရာ 12 +5mpx focal aperture သည် 1.8 mpx ကင်မရာအတွက် 12 နှင့်အလယ်အလတ် 2.2 mpx အတွက်5- Phase detect autofocus - Dual FlashLED - HDR + - မျက်နှာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့် 4K ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း - အနှေးနှင့်အမြန်ကင်မရာနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရန်ရွေးချယ်ရန်။ YouTube မှ
ရှေ့ကင်မရာ ၁.၈ HDR focal aperture + 8 mpx + FullHD ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် YouTube မှတစ်ဆင့်နှေးကွေးသော၊ မြန်ဆန်သောလှုပ်ရှားမှုနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ရွေးချယ်စရာများ
ဆက်သွယ်မှု dual-Nanon SIM + MicroSD အားလုံးနှင့်အတူတူပင်အကုန်အတူတူပင် - 2G: GSM 850/900/1800/1900 3G: HSDPA 850/900/1900/2100 4G LTE: 1 (2100)2(1900)3(1800)4( 1700/2100)5(850)7(2600) 8 (900) 18 (800) 19 (800) 20 (800) 26 (850) 28 (700) 38 (2600) 40 (2300) 41 (2500) - ဝိုင် -Fi 802.11a/b/ g / n; ဝိုင်ဖိုင်တိုက်ရိုက်၊ dual-band - A-GPS အထောက်အပံ့ပါသော GPS GLONASS GALILEO - USB TypeC 2.0 - Bluetooth 4.2 - FM ရေဒီယို -
အခြားအင်္ဂါရပ်များ အလူမီနီယမ်ကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဖန်သားလက်သည်း - ကျောဘက်တွင်ရှိသောလက်ဗွေဖတ်စနစ် - မျက်နှာသော့ဖွင့်ခြင်း - 15W အလျင်အမြန်အားသွင်းခြင်း - Dolby အသံ - ၃.၅ မီလီမီတာဂျက်ပေါက် - Dual Nano SIM + Micro SD slot
ဘက်ထရီ 3000 mAh ဘက်ထရီ
ရှုထောင့် 157 75.3 8 မီလီမီတာ
အလေးချိန် ၆၈ ဂရမ်။
စြေး € 249 ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်အမေဇုံတွင်သီးသန့်စျေးနှုန်း
Terminal ကိုမမြင်ဘဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစမ်းသပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်နေရာမှမသွားနိူင်သောစကားလုံးများနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွန်အမင်းတိုးချဲ့ရန်မလိုပါ၊ ထို့နောက်သင်ဤကောင်းမွန်သောအရာအားလုံးနှင့်ဆိုးကျိုးအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ဤ Moto တွင်ထားခဲ့ပါ G7 ကိုဤနှစ်ခုလက်တွေ့ကျတဲ့ဇယားထဲမှာအကျဉ်းချုပ်။ Terminal ကိုလှုပ်ရှားမှုမှာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီပို့စ်ရဲ့အစမှာ Moto G7 ကိုဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုလုံးကိုငါထားခဲ့တယ်အဖြစ်နည်းနည်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော နောက်တစ်ခုက Moto G7 ကင်မရာတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခု.
Moto G7 ကပေးတဲ့အရာအားလုံး
64 Gb ပြည်တွင်းရေးသိုလှောင်မှု
Nano Sim + Micro SD နှစ်ခုကိုတစ်ချိန်တည်းထောက်ပံ့ပေးသည်
စိတ်ကြိုက်အလွှာမရှိဘဲ Android 9.0
Android ဗားရှင်းအသစ်အတွက်တရားဝင်အထောက်အပံ့ကို ၂ နှစ်အာမခံထားသည်
အဆိုးဆုံး Moto G7
Moto G7 ကင်မရာစမ်းသပ်မှု
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ Android အားစွမ်းအင်သိပ်မပေးသောသို့မဟုတ်မွန်းတည့်ချိန်သို့မဟုတ်မွန်းလွဲပိုင်းတွင် terminal ကိုအားသွင်းနိုင်သည့်သုံးစွဲသူဖြစ်လျှင်၎င်းသည်၎င်း၏အရည်အသွေးပြီးဆုံးခြင်းကြောင့် Android ဗားရှင်းသစ်အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။ Pure Android ရှိခြင်း၊ စနစ်၏ချောချောမွေ့မွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဘက်ပေါင်းစုံကင်မရာများသို့မဟုတ် 15 W မြန်ဆန်သည့်အားသွင်းမှုများရှိခြင်း; ငွေကြေးအရည်အသွေးနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းသည် Motorola သို့မဟုတ်ဤကိစ္စတွင်အထူးသဖြင့် Lenovo ကဲ့သို့သောနိုင်ငံမျိုးစုံ၏အာမခံချက်ကကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောကောင်းမွန်သောဝယ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြောင်းပြန် အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ Android ကိုအများကြီးပေးသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ပြိုင်ဘက်အများစုမှသူတို့၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေးကဲ့သို့သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လိုအပ်သည်, (ပြိုင်ဆိုင်မှုသည် ၆ နာရီမှ ၇ နာရီခန့်ကြာသည်။ ), ထို့နောက်ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ terminal ကိုသင်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရွေးချယ်စရာများရှိသောကြောင့်သင်တို့အဘို့ဒီဇိုင်းမထားဘူး။ ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi A1 သို့မဟုတ် Redmi Note7ကဲ့သို့ဆိပ်ကမ်းဆိပ်ကမ်းများသည်ဆံပင်အတွက် Moto G7 ကိုပေးသည်။
နောက်ပြီးဒီ post ရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာမင်းကိုပြောပြီး Moto G7 ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်မှုမှာငါကောင်းကောင်းမှတ်ချက်ပေးနိုင်အောင်ငါဒီ post ရဲ့အစမှာထားခဲ့တာက Moto G7 ဟာ 3000 mAh ဘက်ထရီကိုတပ်ဆင်ထားသည့်အလွန်ကောင်းသော Android terminal တစ်ခုဖြစ်သည် ၄ နာရီခွဲလောက်မပြည့်သေးဘူး။
ဒါကတစ် ဦး နှင့်အတူဒွန်တွဲ Non-State-Of-The-Art ဟာ့ဒ်ဝဲ, (Snapdragon 632), နှင့်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များထက်စျေးနှုန်းဖြင့်, terminal ကိုကဒီစျေးနှုန်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အလွန်အလွန်ခက်ခဲသည်အရာက Android အကွာအဝေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်ဖြစ်စေပါ။ တူညီသောစျေးနှုန်းအတွက်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်ပိုသောအတွက်အရာအားလုံးနှင့်အတူ Pocophone F1 ကိုရနိုင်သည် Snapdragon 845 ကဲ့သို့အဆင့်မြင့် processor နှင့်အတူ။
Motorola က Moto G7
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Motorola က » အားနည်းချက်ကြီးမားသော၎င်း၏ဘက်ထရီဖြစ်သောကောင်းမွန်သော Android terminal တစ်ခုဖြစ်သည့်ဗီဒီယိုကို Moto G7 ကပြန်လည်သုံးသပ်သည်